Home » Beachbody » Demand ကိုအခမဲ့အစမ်းတွင် Beachbody
Demand ကိုအခမဲ့အစမ်းတွင် Beachbody
Demand ကိုစမ်းသပ်တွင် Beachbody
ကျနော်တို့ကိုသင်ဖို့ဝယ်လိုအားတွင် Beachbody ထဲကကြိုးစားပါမယ့်အခမဲ့အစမ်းတင်ပြ!
နှင့် Demand ကိုတွင် Beachbody သငျသညျ Beachbody လေ့ကျင့်ခန်းရာပေါင်းများစွာမှန့်အသတ်ရယူသုံးစွဲပါ။ အဆိုပါလေ့ကျင့်ခန်းများအပြင်၌သငျ step-by-step မှကြံ့ခိုင်ရေးလမ်းပြသောလေ့ကျင့်ခန်းပြက္ခဒိန်များ, အာဟာရအစီအစဉ်များနှင့်ပိုပြီးအွန်လိုင်း access ကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာတွင်ပဲသငျသညျဝယ်လိုအားဝန်ဆောင်မှုပေါ်မှာဤအသစ်များကိုနှင့်အတူဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်လိမ့်မယ်သော Beachbody လေ့ကျင့်ခန်းအချို့ရဲ့:
Power က 90
Hip-Hop ABS နှင့်အခြားအစီအစဉ်များ
နယူးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အစီအစဉ်များကိုလစဉ်လတိုင်းကဆက်ပြောသည်နေကြသည်။ Demand ကိုလေ့ကျင့်ခန်းတွင် Beachbody သင်၏ကွန်ပျူတာ, တက်ဘလက်, ဒါမှမဟုတ်စမတ်ဖုန်းမှထုတ်လွှင့်နိုင်ပါသည်။
Demand ကိုအခမဲ့အစမ်းတွင်သင့် Beachbody Start မှအောက်တွင် Click
Demand ကိုအခမဲ့အစမ်းတွင်သင့် Beachbody Start မှဒီနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ
သငျသညျ sign up ကိုပွီးနောကျ, သငျသညျမြားကိုလညျးအဖွဲ့ Beachbody ကလပ်မှအဖွဲ့ဝင် access ကိုခံရလိမ့်မည်။ ရေးအဖွဲ့ Beachbody ကလပ်စိတ်ကြိုက်မုန့်ညက်အစီအစဉ်များ, အနာဂတ် Beachbody ဝယ်ယူမှုအပေါ်တစ်ဦး 10% လျှော့စျေးနှင့်အနုပညာရှင်ကြံ့ခိုင်ရေးသင်တန်းဆရာများနှင့်အတူတိုက်ရိုက်ချတ်တို့ပါဝင်သည်။
သင်သည်သင်၏ရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးနောက်ဝယ်လိုအားတွင် Beachbody စောင့်ရှောက်ဖို့ရွေးချယ်ပါက, သင် $ 2.99 တစ်ပါတ်တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုကြိုတင်သုံးလတစ်ကြိမ် $ 38.87 ငွေကောက်ခံပါလိမ့်မည်။ Demand ကိုတွင် Beachbody Beachbody ရဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအရေအတွက်အားခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်အချိန်မရွေးဖျက်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။
မေလ 13, 2015 admin Beachbody, အခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်စေ 1 မှတ်ချက်
ဂျိုးရဲ့နယူး Balance စက်ရုံပြင်ပသတိရအောက်မေ့နေ့ 2015 ကူပွန်
တစ်ခုမှာ "ပေါ်တွင်ထင်Demand ကိုအခမဲ့အစမ်းတွင် Beachbody"
မေလ 13, 2015 မှာ 9: 51 နံနက်
ဒါကသဘောတူညီချက်မဟုတ်ပါဘူး !! ဤသည် beachbody နေဖြင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုကမ်းလှမ်းနေသည်။